Tonga Ao Tsetsenia Ny Haiady MMA, Ary Tompondaka Sahady Ny Zanaky ny Mpitondra Ao An-Toerana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Oktobra 2016 17:14 GMT
Araka izay mety ho tsikaritrao ao amin'ny fira Instagram, mandamina ny fotoanany amin'ny fanatanjahantena sy ny fanazarantena ny mpitarika Tsetsenina Ramzan Kadyrov.
Feno tsanganana tahaka ity nivoaka tamin'ny 24 Septambra ity ny faham-baovaon'i Kadyrov, ary ao no ieboeboany amin'ny fahitany fotoana mandrakariva hitazonany ny bikany na dia feno dia feno aza ny fandaharam-potoanany. Amin'izany fifantohany amin'ny fikarakaram-batana izany, dia tsy tokony atao mahagaga raha mampiditra izany soatoaviny izany amin'ny zanany ihany koa izy, amin'i Eli, Adam, ary Akhmad; mamoaka tsindraindray ny fanazarantena sy ny fiomanantena hiatrika fifaninanana azy ireo ihany koa izy.
Na dia eo aza izany dokambarotra ataony mahazatra ao amin'ny media sosialy izany, dia mbola miezaka ny hanohina ny mponina manerana an'i Rosia hatrany i Kadyrov, raha hita ho mandray anjara amin'ny fifaninanana haiady mifangaro (MMA) ampiatranoana ao Grozny ny zanany telo mirahalahy. Nomanina hifanandrify amin'ny tsingerintaonany faha-40 indrindra izany lanonana natao hankalazana ny zavabitany farany indrindra izany.
Ahitana an'i Akhmad, zananilahy folo taona, nandavo ny mpifanandrina aminy avy any Sochi ny lahatsary navoaka tao amin'ny seho Instagram. Voalaza ihany koa fa nibata fandresena manoloana ireo mpifanandrina aminy ihany koa ireo zananilahy hafa amin'ity lanonana haiady ity.
Vantany vao nivoaka izany dia maro ireo tao Rosia niady hevitra nandanjalanja amin'izay tokony na tsia hanaovan'ny ankizy fifaninanana hiady tahaka izany. Matoky ny kaomiseran'ny fiarovana ny zon'ny ankizy Tsetsenina hanao famotorana amin'ity toe-javatra amin'ny fifaninanana ity i Anna Kuznetsova, kaomisera vaovaon'ny zon'ny ankizy [mg] ao Rosia. Nanameloka izao fifaninanana izao i Fedor Emelianenko, Filohan'ny sendikàn'ny MMA Rosiana sady tompondaka erantany rahateo, nanambara fa mety hiteraka fahasimbana ara-batana sy ara-tsaina tsy ho sitrana intsony eo amin'ny ankizy ny ady. Mitovy hevitra aminy amin'izany fanambaran'i Emelianenko izany koa ny tompondakan'ny ady totohondry manerantany teo aloha sady depiote ao amin'ny Duma ankehitriny antsoina hoe Nikolai Valuev:
Каждый спорт хорош для определенного возраста. Федор абсолютно справедливо заметил, что для детей они (бои) были рановаты, и можно поверить словам человека, который в этом реально разбирается. Бои по правилам ММА заключают в себе возможность добивания соперника в партере, для маленьких детей это недопустимо. Я ничего не имею против ММА: если в нем задействованы дети, для них должны быть определенные ограничения”.
Tsara ho an'ny sokajin-taona iray manokana ny fanatanjahantena tsirairay avy. Marina tanteraka ny nolazain'i Fedor rehefa niteny izy fa aloha loatra ho an'ny ankizy ny miditra amin'ny ady tahaka izany, ary azonao inoana ny tenin'ny olona izay mahalala tsara ny zavatra lazainy. Mamela ny daroka amin'ny tany ny lalànan'ny MMA, ary tsy azo ivalozana izany ho an'ny ankizy. Tsy misy antony hanoherako ny MMA; raha ampandraisina anjara ny ankizy dia misy kosa ny fetra manokana tokony apetraka ho azy ireo.
Ny zavamisy dia mametraka ny lalànan'ny MMA fa afa-mandray anjara amin'ny ady ny ankizy rehefa mahatratra ny faha-12 taonany, ary rehefa manana ny fampitaovana ilaina amin'izany irery ihany. Tsy misy amin'ny zanak'i Kadyrov anefa no mihoatra ny 10, taona, ary hita ihany fa tsy nampiasaina tamin'ny fifaninanan'ny 4 oktobra ny fampitaovana tokony nanaovana.
Tamin'ny famotorana fanampiny nataony ny Kaomiseran'ny zon'ny ankizy Tsetsenina Khamzat Khirakhmatov no namehy fa tsy misy tamin'ny ankizy mpiady no niaritra fijaliana ara-batana na ara-tsaina na dia tsy nisy aza ny fampitaovana fiarovana tokony nanaovana. Tamin'ny filazana fa rehefa tsy nisy ny ray aman-drenin'ny ankizy nametraka fitarainana, dia nandresy i Khirakhmatov fa tsy nisy fanitsakitsahana ny zon'ny ankizy izany tao.
Nilaza ny mpitsaran'ny lalao taty aoriana fa fampisehoam-pahaizana fotsiny iny fa tsy tena fifanandrinana. Nanolo-kevitra moa izy fa tena tsara rindra tokoa ilay izy ka maro ireo nandray hevitra diso nametraka ny “fampisehoana” ho toy ny tena izy. Niresaka ny fitaovam-piarovana ihany koa ny mpitsara, tamin'ny filazana fa mety ho tsy namirapiratra ny lalaon'ireo ankizy ireo raha nanao ireo fitaovam-piarovan-tena, raha zavatra hafa ankoatra ny namboamboarina ny “ady” natao.
Ampangain'i Abuzaid Vismuradov, filohan'ny klioban'ny haiady nanomana ny fifaninanana MMA ho manao izay hamelahana an'i Kadyrov i Emelianenko satria tsy nasaina tamin'ity lanonana ity i Emelianenko.
Nijoro hiaro ny fandraisana anjaran'ny zanaky ny rahalahiny tamin'ny ady ihany koa i Adam Delimkhanov, rahalahy tsy iray tampò amin'i Kadirov, Lefitry ny Praiminisitra Tsetsenina teo aloha sady depiote ao amin'ny Duma amin'izao fotoana izao nampanantena fa hamaly ny teny tsirairay amin'izay lazain'i Emelianenko momba azy ireo. Noherongeronin'i Delimkhanov ny fanambaran'i Emelianenko amin'ny fiantraikan'ny ady eo amin'ny ankizy, tamin'ny filazana fa tsy manana zo ara-maoraly amin'ny fomba fanabeazana ankizy i Emelianenko, satria ny rahalahiny iray tampò aminy aza nidaroka sy nanolana vehivavy tamin'ny taona 2014.
Namafa ny fanehoan-keviny i Emelianenko, izay namoaka ny tsikerany tamin'ny ady tao amin'ny Instagram, ary namoaka indray ny fehezanteny nosoratany teo aloha, na dia novainy aza ny sary.
Ny maraimben'ny Alakamisy 6 oktobra, novalian'i Kadyrov mivantana tamin'ny tsanganana Instagram vaovao i Emelianenko, ary nalainy baraka ity Filohan'ny Sendikà MMA Rosiana ity tamin'ny “famoahana ny sarin-janak'olona hafa ary manapaingotra izany amin'ny “fanehoan-kevitra tsy mandoka.” Tamin'ny fanononana ireo Rosiana manamboninahitra mpivezivezy an-tsoavaly, dia nanoratra i Kadyrov hoe: “Diso lalana tanteraka ianao ry Fedor! Tsy manao tahaka izao ny bogatyrs Rosiana!”
Nampidirin'i Kadyrov ihany koa ny lahatsary namboamboarina ahitana ankizy midoroka toaka sy zavamahadomelina, arahin'ny sarin'ny zanany midradradradra amin'ireo mifanandrina aminy tao amin'ny fifaninanana MMA, ary miafara amin'ireo tifitra ataon'ny boay milalao video sy mitondra ny amboarany. Ny horonana farany moa dia manasongadina fanontaniana tsotra hoe: “Fiankinana amin'ny rongony sa fomba fiainana mahasalama?
A video posted by Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) on Oct 6, 2016 at 3:35pm PDT
Tsy vahiny amin'ny zavatra mampiady hevitra i Kadyrov, na ao amin'ny Instagram izany na eny amin'ny tontolo hitam-bahoaka. Efa nahatezitra olona maro ny fomba fanapahany amin'izay lazain'izy ireo taty aoriana hoe “Fiavahana Tsetsenina” ao anatin'ny Federasiona Rosiana, fa miasa ivelan'ny fetran'ny lalànan'ny federasiona ny Repoblika Tsetsenina.
Araka ny nosoratan'ny Novaya Gazeta tamin'ny tatitra manokana tamin'ny “fifanarahana” manokana nifanaovan'i Kadyrov tamin'i Moskoa:
Конституция закрепляет принцип разделения властей в качестве одной из основ государственного строя России. Но Рамзан Кадыров, что называется, «на пальцах» продемонстрировал федералам: на его территории Конституция РФ не действует.
Iray amin'ny fototra fanorenana ny fomba fitondran'i Rosia ny fiantohan'ny Lalampanorenana ny fisaraham-pahefana. Saingy nasehon'i Ramzan Kadyrov amin'ny fomba fiteny laika tahaka izao ny governemanta federaly: tsy manampahefana ao anatin'ny sisintaniny ny Lalampanorenan'ny Federasiona Rosiana.
Ao anatin'ny fifantohana indray amin'ny tara-pahefan'i Kaydrov mihoatra noho izay tokony ho izy ao amin'ny politika rosiana raha eny amin'ny fitsarana amin'izao fotoana izao ny raharaha anenjehana ireo lazaina ho namono an'i Boris Nemtsov, ho an'ny sasany, dia lasa fampahatsiahivana ity tokon-tantara ity fa tahaka ny misy lalàna roa samy hafa ao amin'ny Federasiona Rosiana: Ny iray ho an'i Tsetsenia, ary ny iray hafa ho an'ny hafa rehetra ao amin'ny firenena. Nandray anjara fitenenana ihany koa i Dmitriy Peskov, mpitondrateny ofisialin'i Kremlin, nitsikera ny fandefasana tamin'ny fahitalavitra ny fifaninanana tamin'ny fanoritana fa tsy maro ny olona tena nahita zava-mitranga. Ary dia mbola mitohy ny fampitandremana ara-politika ataon'i Kremlin sy amin'i Tsetsenia amin'ny ankapobeny.